‘सर प्लसटु पढ्ने केटी त... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
‘सर प्लसटु पढ्ने केटी त बुक भैसकि!’
‘मसँग एउटा माल छ सर। बजारमा नँया आएको। एकदम फ्रेस...!’
म स्तब्ध भएँ! त्यसपछि लज्जित। हो त बास्तम्मा म प्रेमी होइन ग्राहक हो। यो सानो फोहोरी कोठा बजार हो! र ऊ बेच्दै छ आफूलाई। अनि म खाली रित्तो हातले ....
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २६, २०७४, ११:०४:३७